Iyo iPhone 7 kesi inoonekwa, iyi isina mhete yekamera | IPhone nhau
Iyi: iPhone 7 kesi inoonekwa, iyi isina mhete yekamera
Sezvatakambotaura pazviitiko zvakasiyana, mukati memwedzi miviri yekuratidzwa kwepamutemo kweiyo iPhone 7, zvinhu zvakawanda zveiyo inotevera apple smartphone ichaonekwa. Zvizhinji zvezvinhu izvi zvichave zvekunyepedzera, (pamwe) senge iyo kesi iyo pfacha pane webhusaiti yeDutch, zvimwe zvichaita kuti tisave nechokwadi, senge kamera module izvo zvinofungidzirwa kuti zvakaburitsa mushandi weFoxconn, uye zvimwe zvichaita kuti tifunge kuti ndezvechokwadi, sekupedzisira iPhone 7 kesi iyo OnLeaks yakabuda.
Maminetsi mashoma apfuura murume wechiFrench, uyo kune vazhinji (kusanganisira ini) ndiye akanakisa firita iripo nhasi, akaburitsa mufananidzo wauinayo pazasi pemitsara iyi. Kunyangwe isu tichigona kufunga kuti yakafanana chaizvo nemufananidzo wakaburitswa padandemutande reDutch webhusaiti, pane zvinhu zvinoverengeka zvekufunga nezvazvo: yekutanga mhando yemufananidzo uyo wakaburitswa neOnLeaks. Kune rimwe divi, unotevera mufananidzo unoratidzika zvakafanana nezvataizoona dai taive ne iPhone 6 / 6s pamberi pedu uye, kana pasina zvikatyamadzo zvikuru, iyo iPhone 7 ichave yakapotsa yatsvaga kune iyo iPhone yakaunzwa muna2015.
Sezvo ini ndataura mune iyo posvo nezve iyo casing yakaburitswa neDutch webhusaiti, iyo mitsara yeantena, izvo zvinoonekwa chete kumusoro uye kuzasi kumicheto, ivo havana chero vertex pakona panosangana ma curves, sezvataizotarisira kubva ku "Apple dhizaini". Chekupedzisira, uye izvi zvaizosimbisa iyo schematics uye inopa rakaburitswa mumwedzi ichangopfuura, iyi dzimba dzakaremara kunze kupinda mugomba remukamuri, iyo yaizosimbisawo kuti paisazova neringi.
Mune mawonero angu, iyi chaiyo yegoridhe iPhone 7 kesi. Ndinozviona zvinonyadzisa kuti iko kushomeka / kuchengetedzwa kwekamera hakuna kuwedzeredza uye kwakafanana kupfuura izvo zvatinoona mupfungwa yemufananidzo wemusoro, asi ndinofara kuti bvisa mhete kubva ku iPhone 6 / 6s, kwandiri chakaipisisa dhizaini yemhando yapfuura. Kune zvirinani kana zvakaipa, zvinoita sekunge magadzirirwo eanotevera Apple mafoni emagetsi ari kusimbiswa. Ko mamwe makuhwa nezve ayo marongero achasimbiswa futi?
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone Zviteshi » iPhone 7 » Iyi: iPhone 7 kesi inoonekwa, iyi isina mhete yekamera
Dhizaini yacho yakanaka, idanho diki kubva ku6s kusvika ku7 sezvo yaive kubva ku4s kusvika ku5.
Iko kusaziva kutaura ndekweiko? Kubva pa4s kusvika pa5, chimiro chegirazi chakashandurwa kuita anodized aluminium, shanduko ine hutsinye. Pano chete mitsara yachinja zvishoma ...
Icho chihombe kwazvo, kuratidzwa kwe lens iyo yaizofanirwa kuratidza denga rinoenderera netirairi repasi?
Mhoro Gaston akadaro
Yakawanda trout yako yekutaura, hauone kuti inonyatso kutaura back cover kwete mbozhanhare.
Izvo zvakafanana zvakafanana
Apple inogadziridza Apple Music app yeApple
Apple yakamanikidzwa kubhadhara mamirioni makumi maviri nemashanu emadhora ekushandisa patents